मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन : ईश्वर पोखरेलको घटुवा कि बढुवा ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन : ईश्वर पोखरेलको घटुवा कि बढुवा ?
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन : ईश्वर पोखरेलको घटुवा कि बढुवा ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार अपराह्न १२औँ पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे । सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर पार्टीभित्रै बढेको असन्तुष्टिबीच पुनर्गठन गरिएको मन्त्रिमण्डलमा नयाँ ल्याएका मन्त्रीहरूको खासै चर्चा छैन बरु रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेबारीबाट अलग गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल ‘हट केक’ बनेका छन् ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास मन्त्रालय र लीला श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पार्वत गुरुङलाई ओलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनाएका छन् ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका असन्तुष्टि विभिन्न माध्यमबाट बाहिरिइरहेका छन् । पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको उनीहरूको आरोप छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेल त्यसको घानमा परेका छन् अर्थात् प्रचण्ड र नेपाल पक्षधर मिडिया पोखरेलविरुद्ध खनिएका छन् । उनलाई पाखा लगाएको टिप्पणी भइरहेका छन् । आखिर प्रधानमन्त्रीले पोखरेललाई घटुवा गरेका हुन् कि बढुवा ? केही तथ्यहरू हेरौँ :
प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमात्र आफूमा राखेर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको अधिकांशको टिप्पणी छ । सामाजिक सञ्जाल यस्तै आसयले भरिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई जगेडामा राखेका या बिनाविभागीय बनाएका होइनन्, हालसम्म प्रचलनमा रहेको र प्रधानमन्त्रीले मात्रै सञ्चालन गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । यो मन्त्रालय सबै हिसाबले रक्षा मन्त्रालयभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो तथ्यसँग सबै जानकारी छन् ।
रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनाको तालुक मन्त्रालय हो । सेना आफैँमा सिंगो राज्य हो तथापि यो मन्त्रालयको भूमिका आफैँमा प्रभावकारी हुँदैन र यो एउटा मन्त्रालयमात्र हो । अहिले दिइएको जिम्मेवारीअनुसार उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग समन्वय गर्न सक्छन् । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अधिकार उनीसँग छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय आफैँमा शक्तशाली मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय नै हेर्छ । अर्को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मानिने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (भलै अहिले निरीह बनाइएको छ) यसै अन्तर्गत छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका निकाय र सातवटै प्रदेश सरकारसँगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग छ ।
पोखरेललाई किन बनाइयो शक्तिशाली ?
नेकपाभित्र अहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बेला‑बेला एकै कित्तामा उभिने गरेका छन् । आफ्नै ‘निरंकुश’ कार्यशैलीका कारण दुवै प्रभावशाली नेता एक ठाउँमा उभिइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पोखरेलले बलियो साथ दिने गरेका छन् । नवौँ महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म हरेक दुःख‑सुखमा साथ दिइरहेका र प्रधानमन्त्रीविरुद्धका हरेक मोर्चाबन्दीमा ढाल बनेर उभिएका पोखरेल ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र हुन् ।
नेकपाले चैतमा ‘एकता महाधिवशेन’ गर्ने घोषणा गरेको छ । दुई ठूला दल एक भएपछिको महाधिवशेन शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । प्रचण्ड र नेपाल आ‑आफ्नै राजनीतिक दाउपेच र तयारीमा लागिरहेका बेला सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने ओलीलाई स्वास्थ्यले पनि खासै साथ दिइरहेको छैन । यसै मेसोमा पार्टीभित्रबाटै सरकार असफल भएको आरोपका बीच राजनीतिक घेराबन्दीको सामना गरिरहेका ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा पोखरेललाई शक्तिशाली बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
प्रकाशित समय २२:०३ बजे
पछिल्लाे - प्रहरी जवान पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन
अघिल्लाे - केन्द्रबारे विवादमा झडप, गाउँपालिका अध्यक्षसहित १४ घाइते